Izolo emndenini kaKsenia Sobchak ugubha umcimbi obalulekile - indodana yenkanyezi ye-TV yaphenduka inyanga! Ngesikhathi sosuku lokuqala olubalulekile empilweni yemvuthu, umama omncane ushiye umlayezo othinta inhliziyo ku-Instagram yakhe.
UKsenia wabonga wonke umuntu owamhalalisela ngalolu suku olubalulekile futhi waphawula ukuthi indodana yakhe yindoda eyithandayo njalo futhi ngokungenamthetho:
... ukutholakala okuyinhloko kule nyanga, kungakhathaliseki ukuthi kunzima kangakanani, kungakhathaliseki ukuthi ama-hormone "adlala" kanjani, kungakhathaliseki ukuthi abanye baziphatha kanjani, manje senginomuntu othanda njalo futhi ngokuqinisekile. Futhi ujabule ukungibona. Njalo. Futhi nakho konke okunye engikukwazi ukukuphatha. Akuyona okokuqala :)!
Ababhalisile I-Instragram uKsenia Sobchak babecabanga ngokukhathazeka ngesimo sabo abathandayo. Yini eyayingenzeka phakathi nalesi sikhathi, lapho i-Xenia kuzodingeka khona "ukubhekana"?
Ukuqaphela ukuthi ngemva nje kwesonto ngemuva kokuzalwa komntwana uSobchak ubuyele empilweni yezwe futhi kakade wayenezikhathi zokukhanyisa ezenzakalweni eziningi, konke kuhamba kahle empilweni yakhe: umama omusha usuhle kakhulu, ujabule, ujabule futhi ujabule! Noma kunjalo, kwenzeka okuthile ...
U-Ksenia Sobchak ushicilela okuthunyelwe okubalulekile ku-Instagram
Oh, lokhu Instagram! Abasebenzisi be-inethiwekhi ethandwayo yokuxhumana nabantu, ngokulandela ngokulandelayo zonke izindaba zakamuva zabamhlonishwa, sekuyisikhathi eside befunda ukubona "izinsimbi zokuqala" zezinkinga ezinkulu zomndeni. Ngakho, ababhalisile be-Intsagrams abokuqala ukusola ukuhlukunyezwa ebuhlotsheni phakathi kuka-Agni Ditkovskite no-Alexei Chadov, u-Irina noSergey Bezrukov, uKsenia Borodina no-Kurban Omarov, u-Olga Buzova noDmitry Tarasov nezinye izinkanyezi eziningi. Ngalesi sikhathi, abalandeli baka-Xenia Sobchak bajabula lapho bebona amazwi ka-Omar Khayyam ekhasini lakhe le-Instagram mayelana nokuthi abantu abasondele kangakanani baba abangabazi. Ngaphezu kwalokho, ukucaphuna kwembongi omkhulu kwakuhambisana nokuhlaziya okuphawulekayo kwe-Xenia uqobo lwakhe:
Abantu basondelene kancane kancane, abangabazi-masinyane. Omar Khayyam (c) Nakekela lokho onakho. Uma ungaqapheli, kuhlale kufika isikhathi lapho okungenziwanga-sekuphuzile kakhulu.
Ngokushesha abathandi baqala ukududuza inkanyezi ye-TV, babhala ukuthi kwenzekani kuye ekucindezelekeni kokubeletha:
i-anna_dry izoba 😄 ngenyanga yokuqala emva kokuzalwa, ngilele njalo kusihlwa ngo-21: 00, umyeni wami wathi isikhathi sokukhala sifikile
oksana_shalneva Ngeholide lokubeletha, imicabango enjalo iyajwayelekile
nadia_jeleva_ Ksyusha! Lokhu ukucindezeleka okulandelayo, ama-hormone ayanqamuka-futhi umbono wezinto zonke ubukhali kakhulu-konke kuzodlula!
elenazolotowater Lokhu "depresnyak." ekuphileni konke kwenzeka.
Njengoba u-Xenia engazange adalule amakhadi, echaza isizathu sokuthi "ukucindezeleka" okusheshayo, abanye abalandeli bacabanga ukuthi uyinkinga ehamba phambili ebuhlotsheni bakhe nomyeni wakhe.
Amazwana abakholelwa ukuthi uMaxim Vitorgan ukhathele ukukhuthazelela "iqembu" lomkakhe:
gulnazjupiter78 Kubonakala sengathi ukubekezela kukaVitorgan kuye kwaqhuma. Hhayi, okungenani uyindoda, hhayi i-rag. Wathi ngokusobala noma emndenini, noma udansa. Kusobala ukuthi ungokwenani lomndeni. Bambelela kuso kuyadingeka, okuthenjelwayo, okulondolozayo ngokwemindeni, kungani ugijimela njenge-dragonfly? Ungagijimi njenge ((((. Izinguquko eziphambili ngaphambi kokuphuza kakhulu.
brovi.brezhneva_ Masika waphuma ukuthi umama ufika ekuseni.
U-Ekaterina Klimova uqale watshela ngokukhashelwa komyeni wakhe wangaphambili
Ukukhanda izinwele ezintsha ngu-Alyona Vodonayeva kubangele ukudumaza kuwebhu, isithombe
Umyeni ka-Evelyn u-Bledan usolwa ngokushaya ingane ngesihluku
U-Ivan Urgant uthumele abalandeli bakhe ngesithombe sikaMama
ULyaysan Utyasheva uphinde wavuselelwa iminyaka emibili, ividiyo
USvetlana Bondarchuk ubhekene necala lokubhala nge-photographer osemusha
I-chicken fillet ngo-ukhilimu omuncu nge-dill
Isimo Sezulu kuGelendzhik ngoJuni 2016: ukulungele ukuvakasha
Ukuhlanzwa komzimba ngendlala
Inkinga yeminyaka emithathu: imithetho emihlanu yokuxhumana kwabazali nengane
Amapancake kuhhavini ye-microwave
U-Alla Pugacheva uphinde walahlekelwa isisindo, kwenzekani ku-prima donna?
I-Cocktail Black yaseRashiya (Emnyama)
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Scorpio
I-Lenten Pie nama-apula
Umthombo omuhle wemaphrotheni yemifino
Izinsuku eziphumelela kakhulu zokulayisha